Posted By: KongoLisolowaa: May 9, 2020 00: 50 No Comments
Si kale haddii loo dhigo, haddii hooyadu ay saaxirad tahay, gabadhu sidoo kale waxay noqon doontaa saaxir; oo haddii hooyadu tahay mid wanaagsan, gabadhu sidoo kale waa inay noqotaa mid samafal ah ?? Hadana haddii hooyadu khiyaanaysay aabaha gabadha, miyaa gabadhu maalin uun ninkeeda ku khiyaamayn lahayd Zoe Kabila ??
Sida hooyo, sida gabadha oo kale, laakiin mararka qaarkood badhanka ma laha udgoonka ubaxa si buuxda u ubaxa: marka, haddii ay sidaas tahay, waa inaad taxaddar muujisaa intaadan gabadh guursanin. "Haddii kale, waxaad ku ooyi doontaa magaca hooyadiis ilaa aad weydiisatid in lagaa qaado baaritaanka DNA (...)"
Sep27 09: 01
François Mackandal, Afrikaan ay weerareen faransiisyadii faransiiska ee Congo una tarxiilay gumeysiga Santo Domingo (Jamhuuriyadda Haiti) wuxuu abaabulay kacdoon weyn waqooyiga-galbeed ee gumeysiga bartamihii qarnigii XNUMX-aad.
Sebtember 27, 2020 01: 11
Dutty Boukman, oo asal ahaan ka soo jeeda Jamaica wuxuu ahaa addoon maalintii, laakiin habeenkii, "Hougan", wadaadka diinta Vodou; Isaga ayaa abaabulay xafladii Bois Caïman ee August 14, 1791, taas oo quduus ka dhigtay kacdoonkii guud ee la diyaarinayay.
Sebtember 27, 2020 00: 30
Jean-François Papillon wuxuu ka mid ahaa hogaamiyayaashii kacdoonkii addoonta Haiti ee May 1791, oo ay weheliyaan Dutty Boukman, Georges Biassou, Jeannot Bullet iyo dabcan, Toussaint Louverture
Sebtember 27, 2020 00: 20
Magdhawgii ay Faransiisku ku soo rogeen Haiti: 1825kii, oo hoos timaadda wasaaradda Villèle, falcelin diidmo badan leh oo la yiraahdo Toulousain oo sidoo kale sodog u ahaa hanti-yaqaan hodan ah oo ka socda Réunion, Madame Desbayssans, Faransiiska ayaa ka dalbaday Haiti, iyagoo ku hanjabaya koox ka kooban 14 markab dagaal oo loogu talo galay dib u helid hubaysan oo dib loogu soo celiyo addoonsigii, "Magac xumo" oo ka kooban 150 milyan oo faran oo dahab ah
Sebtember 27, 2020 00: 00